४८ लाख बालबालिकाले कहिले पाउँछन् कोरोनाविरुद्धको खोप ? | Ratopati
personमाया श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक १०, २०७८ chat_bubble_outline0
सरकारले कार्तिक २८ गतेदेखि बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिने निर्णय गरेको छ । यद्यपि कोरोनाविरुद्धको फाइजर खोप सबै बालबालिकाले भने पाउने छैनन् । १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका दीर्घरोगीलाई खोप दिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निश्चित गरेको हो । फोक्सो, मधुमेह, उच्च चाप, मुटु, मिर्गौला लगायतका दीर्घरोगीले खोप पाउने छन् । गत सोमबार कोभ्याक्स सुविधामार्फत अमेरिकाबाट एक लाख ६ सय २० मात्रा फाइजर खोप नेपाल आइपुगेको छ ।
सो खोप करिब ४५/४६ हजार दीर्घरोगी बालबालिकाले पाउने परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहाल बताउँछन् । नेपालमा १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ४६ हजार हजार दीर्घरोगी रहेको अनुमान गरिएको छ । यस्तै, खोप लगाउन छुटेका दीर्घरोगीले समेत फाइजरको खोप पाउनेछन् । ​दीर्घरोगीले फाइजर खोप कार्तिक २८ गतदेखि देशभरका २४ अस्पताल र काठमाडौँ उपत्यकाका ९ अस्पतालबाट खोप लगाइने छ ।
अमेरिकामा विज्ञहरूले ५ देखि ११ वर्षका बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाउन सिफारिस गरेका छन् । अमेरिकी सरकारको एक समितिले फाइजर खोप ५ देखि ११ वर्षका बालबालिकालाई लगाउन सिफारिस गरेको छ । यस्तै यस निर्णयलाई अमेरिकी नियामक संस्था फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए)ले समर्थन गरेको छ ।
एफडीए र सीडीसी (रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र)ले अनुमति दिएपछि मात्रै यो निर्णय लागू हुनेछ ।
नेपाल कति लगाए खोप ?
पहिलो र पूर्ण मात्रा गरी एक करोड ५४ लाख १९ हजार ४ सय ५ मात्रा खोप लगाइएको स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको २८.५ प्रतिशतले एक मात्रा खोप लगाएका छन् भने २२.३ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा लगाइसकेका छन् ।
सरकारले कुल जनसङ्ख्याको लक्षित समूह ७२ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ९९ लाख २२ हजार १ सय ६४ जना खोप दिने तय गरेको छ । जसमा ४३.४ प्रतिशतले कोरोनाविरुद्धको पहिलो मात्रा लगाएका छन् । यस्तै, दुवै मात्रा ३४.० प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।